Entre-nous | Sekrima
FILAZANA MANJO MPIKAMBANA FECPAMA SEKRIMA
Narcisse Delphino Randrianantenaina Vorimana TG UR SEKRIMA Toliara dia nandefa izao message izao,
Amin’ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo tapaka sy namana SEKRIMA rehetra fa nodimandry afak’omaly indray Ato MASINA aty Toliara, ny razana dia andrasana eny antranony eny Amboroneoky Mahavatse I,
Ny fandevenana kosa dia rahampitso Zoma 09/01/2015. Ny Union Régional (U.R.) Toliara dia hamangy hitsapa alahelo ny fianakaviana androany hariva @ 5ora izay ho tarihin’ny Prezidan’ny Vondrom-paritra Atoa Potéany Toliara ihany.
Ry Kamarady mpikatroka!!
Ampahatsiahivina isika izay nahazo fiantsoana amin’ilay « Formation » izay hatao ny Talata 11 Novambra 2014 ho avy izao mba ho tonga amin’ny 8 ora tsy diso, eto amin’ny Foibe Sekrima Behoririka
Aza hadino ny mitondra Kahie sy fanoratana!!
Misaotra amin’ny fahavononana!!
Ny union regionale sekrima eto tana dia miantso ny mpikambana rehetra tsy ankanavaka ho tonga ao@foibe behoririka ny talata 14 oct @9 ora maraina.zava-dehibe no ampitaina amintsika ka manantena ny fahatongavanao.